Sat, Apr 21, 2018 | 03:39:44 NST
लमजुङ, पुस २३ – लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–२ देउरालीमा तीन युवाले बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गरेका छन् । संयुक्त लगानीमा उनीहरुले चिनारी कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् । देउरालीकै रमेश पौडेल, काठमाडौंमा रहेका भरत पोख्रेल र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत तनहुँ कालीमाटीका रामबहादुर पाण्डे आपसमा मिलेर देउरालीमा बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।
उनीहरुको फार्ममा अहिले साना ठूला गरी एक सय ३० भन्दा बढी बाख्रा छन् । फार्ममा लोकल खरी, जमुनापारी, बारबारी जातका बाख्रा छन् । २० रोपनी जग्गामा बकाइनो, किम्बु र मण्डेला जातका घाँस लगाइएको छ । १५ लाख बढीको लगानीमा आधुनिक बाख्राको खोर निर्माण गरिएको छ । फर्ममा पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन् । कामदारका लागि दुई वटा आवास घर पनि बनाइएको छ । २०७१ सालबाट सुरु गरिएको उनीहरुको बाख्रा फार्म सञ्चालनमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको सञ्चालक मध्येका एक पौडेलले बताउनुभयो ।
‘बाख्रापालन व्यवसाय सञ्चालनमा एक करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, उत्पादन हुन थालेपछि कम्तिमा पनि मासिक तीन लाख आम्दानी हुने अनुमान छ’, उहाँले भन्नुभयो । धमाधम गाउँ छोडेर शहर पस्नेको संख्या बढिरहेको बेला उहाँ भने पाखापखेरीमै पैसा फलाउन सकिने सम्भावना देखेर गाउँमै बस्नुभएको छ । ‘गाउँमै केही गरुँ भनेर यहीँ बसी बाख्रापालन व्यवसाय शुरु गरेका हौँ’, १७ महिना कतार बसेर आएका पौडेलले सुनाउनुभयो ।
उहाँको प्रायः समय बाख्राको हेरचाहमै बित्ने गर्छ । अरु दुई जना लगानीकर्ता पनि बेलाबेलामा फर्म आउँछन् र बाख्राको स्याहारसुसारमा जुट्छन् । कृषिमा तत्कालै नाफा नहुने उनीहरुको भनाई छ । सिञ्चाईंको समस्या नरहेको बताउँदै रमेशले बाख्रापालनसँगै अब व्यवसायिक माछापालन र तरकारी खेती गर्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।
समयमा प्राविधिक सेवा नपाइनु नै बाख्रापालक किसानको साझा समस्या रहेको उनीहरुको बुझाई छ । उत्पादित मासुको बिक्रीका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो । बाख्रा पालन व्यवसायमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले सक्दो सहयोग गर्ने जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङका प्रमुख डा. लक्ष्मण ढकालले आश्वसन दिनुभएको छ । डा. ढकालले लमजुङमा बाख्रापालन व्यवसायको सम्भावना उच्च रहेको र यस व्यवसायमा पछिल्लो समय किसान आकर्षित हुँदै गएको बताउनुभयो ।